Akụkọ - Ọdịiche dị n'etiti igwe ọkụ ọkụ eletrik na ọkụ mmiri gas?
N'ịbụ ndị na-aga n'ihu na oge, enwere ọtụtụ nhọrọ, dị ka ọkụ ọkụ ọkụ eletrik, mmiri ọkụ gas na ike anyanwụ, wdg. Kedu nke dị mma karịa ka ọ dị mma iji mee ihe?Ka anyị lelee ngụkọta n'okpuru!
1. Ọnụ ntụnyere
N'ịgbakọ site na ọnụahịa naanị, ndị na-ekpo ọkụ gas dị ọnụ ala karịa ọkụ eletrik, ma ị na-enweta ihe ị na-akwụ.Enwere igwe ọkụ dị elu na nke dị ala yana ọkụ ọkụ eletrik.
2. Ntụle ọrụ
Ndị na-ekpo ọkụ ọkụ eletrik na ndị na-ekpo ọkụ gas nwere n'ezie uru na ọghọm ha n'ihe gbasara ọrụ.Ọtụtụ ndị na-ekpo ọkụ ọkụ eletrik nọ na ọnọdụ ikike a kapịrị ọnụ.Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị òtù ezinụlọ, ha ga-achọ ka ha tụgharịa gaa ịsa ahụ, ebe ndị na-ekpo ọkụ gas adịghị oke.Ma ndị na-ekpo ọkụ gas, ịkwesịrị ichere maka sekọnd iji gbapụ mmiri oyi tupu mmiri ọkụ na-asọba n'isi ịsa ahụ gị.
N'ezie, ha abụọ nwere ihe ize ndụ ụfọdụ.Igwe ọkụ ọkụ eletrik nwere ihe egwu nwere ike ịpụ n'ihi ọkụ eletrik.Ndị na-ekpo ọkụ mmiri gas na-arụ ọrụ site na gas.A na-emepụta carbon monoxide mgbe combustion ezughi oke.A ga-egbu ndị mmadụ nsi mgbe ikuru ume.Ya mere, a gaghị etinye ihe ọkụkụ mmiri n'ozuzu ya n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, a ga-etinyekwa ya na ebe ikuku na kichin dị ka o kwere mee.
Ọtụtụ ndị mmadụ nwere àgwà nke ịsa ahụ kwa ụbọchị, iji ogologo oge mee ihe, onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-achọkwa nlekọta, karịsịa igwe ọkụ eletrik chọrọ nkwụsịtụ mgbe niile.
Site na techonoly ọhụrụ ahụ, ndị na-ekpo ọkụ gas Vangood na-ekewapụ ọkụ eletrik na mmiri, enweghị ọnụ ọgụgụ, nkwụsị ike magnetik, ọkụ ọkụ ngwa ngwa, nchekwa ike.Mmiri dị ndụ alkaline na-adịghị ike, mmiri nke bara uru maka ahụ mmadụ.